Chitter: Guqula abaThengi babe ngoonozakuzaku boKwazisa ngeNtlalontle! | Martech Zone
Chitter: Guqula abaThengi babe ngoonozakuzaku boKwazisa ngeNtlalontle!
NgoMvulo, Oktobha 27, 2014 NgeCawa, Oktobha 26, 2014 Douglas Karr
I-Chitter iapp ekuvuza ngembuyekezo yasimahla kunye nezaphulelo ezizodwa zokuthumela iifoto kwinethiwekhi yakho. Amashishini angajoyina ngaphandle kweendleko, ukuseta izibonelelo ezinokuthi zifunyanwe ngabasebenzisi ngeqonga. Ukuhlawulela isithembiso, kufuneka babelane ngesithombe esikhuthaza ukusekwa kwinethiwekhi yabo yemidiya yoluntu.
Chit (inkcazo) -Isibonelelo esikhethekileyo, ithuba lokonga imali, inkuthazo, okanye ikhuphoni elifumaneka ngokukodwa kwiChitter app.
I-Chitter usetyenziso olusekusekweni kokufumaneka kwi-Android nakwi-iOS. Ngokwabelana ngeefoto, umthengi wakho ngoku uthengisa kwaye uphakamisa iimveliso zakho, iinkonzo kunye namava akho. Oku kunokunyusa ngokuphawulekayo ukufikelela kwakho kunye nokubonakala kwimidiya yoluntu, ukunciphisa iindleko zokufumana abathengi, kunye nokwandisa ukugcinwa kwabathengi.
I-Chitter isimahla ukuba amashishini abhalise kwaye ithatha kuphela imizuzu embalwa ukuseta. Ukhululekile ukuba ulayishe uninzi Iitshiti njengoko ungathanda ukubonakala kwishishini lakho okanye kwimibutho Chitter bonisa iziphumo kwi-mobile app. I-Chitter Ngaba inempawu zepremiyamu ezenza ukuba izibonelelo zenziwe kwisalathiso ziinjini zokukhangela, zifumane iidilesi ze-imeyile zomsebenzisi kwaye ziqwalasele kubahlalutyi kubalo lwabathengi bakho.
U-Eric Dye unodliwanondlebe olukhulu kunye noSeth Knapp, iGosa eliyiNtloko lamava Chitter, kuthungelwano lwePodcast yoShishino.
tags: ku khuthazaukuxhasaukuncwinaukuxhaswa kwabathengiIdayi yerickhuthazaukuthengisa ngentengisoIsicwangciso-qhinga seendaba zentlaloUkwabelana ngentengiso yoluntuseth knappukwabelana ngoluntu
Uphendlo lukaGoogle oluDuduzayo lwaMoyikisa!
Into esiyenzileyo yokunyusa ukuzibandakanya kwi-Twitter